ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » တစ် Younger တို့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့5လြယ္ကူလုပ
တစ် Younger တို့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့5လြယ္ကူလုပ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: အောက်တိုဘာ. 30 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
“ငါအငယ်သောမိန်းမအဘို့အရှာနေပါ၏သို့သော်အများစုမှာအမျိုးသမီးများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အသက်အရွယ်ပတ်လည်မှာတစ်စုံတစ်ဦးချိန်းတွေ့ကြစေလို. ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ?” – anonymous
ယနေ့ကျင်းပသည့်မေးခွန်းအမည်မသိနေဖို့ရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းတော်မူသောငါတို့၏စာဖတ်သူတွေတဦးထံမှဖြစ်သည်; ကျွန်တော်တို့ဘီလ်ကသူ့ကိုမခေါ်ပါလိမ့်မယ်. နောက်တဖန်မေးခွန်း Read. ဘီလ်ပြီးသားသူကိုရှာတတ်၏သားအငယ်၌ထိုမိန်းမသည်တစ်စုံတစ်ဦးသည်သူ၏အသက်အရွယ်စိတ်ဝင်စားမည်မဟုတ်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချသည်မည်မျှသတိထားမိမှာ. ဒီလုနီးပါးစစ်မှန်တဲ့လာရန်အာမခံချက်သောကိုယ်ကျိုးပြည့်စုံရာယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်. သင်ကျရှုံးသွားတာဘဲဆင်းနက်ရှိုင်းယုံကြည်လျှင်, သို့ဖြစ်. သင်တို့သည်လိမ့်မည်.
တိုတိုပြောရရင်, ဟုတ်ကဲ့, သင်လုံးဝသင့်အဘို့အညာဘက်ယ့်အငယ်သောမိန်းမများကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါသည်. သင်သည်ကိုယ့်ရည်မှန်းထားရန်လိုအပ်ပါတယ်, အရေးယူ, နှင့်သင်တန်းနေဖို့.
ပဌမ, ပြည်တွင်းရှိနက်ရှိုင်းသောဆင်းကြည့် ယူ. သင်တို့အားတစ်ဦးအသက်ငယ်သောမိန်းမတွေ့ဆုံချင်တယ်အတိအကျဘာကြောင့်ကျောင်းထွက်တွက်ဆ. ပြီးတော့ဒီပြည့်စုံသောမိန်းမကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုတာစဉ်းစားမိ. သင်ဖြစ်နိုင်လုပ်နိုင်တဲ့သလောက်အသေးစိတ်အတွက်သူမ၏ပုံကိုဖော်ပြပါ. ထိုအခါ, စာရွက်တစ်ရွက်ကိုပေါ်ချရေး. သူမ၏အသက်အရွယ်စာရင်း, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်, စရိုက်များ, ဝါသနာ, Like နှိပ်မနှစ်သက်ရာ, စသည်တို့ကို. သင့်ရဲ့ကြီးမြတ်အသေးစိတ်၌သင်တို့အဘို့အပြည့်စုံသောထိုမိန်းမသည်ဖော်ပြခဲ့ပါပြီဆိုတာနဲ့, စက္ကူ၏အပိုင်းအစတက်ခေါက်ပြီးသည်သင်နှင့်အတူကသယ် 1 ရက်သတ္တပတ်.
သင်သည်သူနှင့်အတူပြီးသားဖြစ်ကြောင်းကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ. သင်ဘာလုပ်မလဲ? သင်နဲ့ပါတ်သက်ပြီးဘာတွေပြောမည်? သင်သည်အဘယ်မှာရှိသွားလိမ့်မည်? အမှန်တကယ်ကခံစား၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုသို့ get — သင်သည်သူနှင့်အတူနေတဲ့အခါသင်မည်သို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်? ဤဖြစ်စဉ်အားလုံးသည်ရီစရာမှုတ်စေခြင်းငှါ, သင်မူကား, ရိုးရိုးဆင်းရေးသားခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုဘာလိုချင်သည်ကိုသိရကြပါ, သင်တို့အနားမှာကြောင့်ဆိုတော့သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့် 80%!
– Lee က Iacocca
သင်မလုပ်ဘူး. ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းလူမှုရေးအမည်းစက်နှင့်ပြည့်ဝ၏. ကျနော်တို့စိုးရိမ်ပူပန်လျှက်ဤမျှအလုပ်များင် “အဘယ်သို့သောအခြားသူများကိုစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်” ကျနော်တို့ကိုယ်ပိုင်အိပ်မက်တွေကိုလိုက်ရန်ကြောက်လန့်ရောက်နေကြောင်း. ဟုတ်ကဲ့, တခြားလူများအပေါ်တရားစီရင်ခြင်းကိုလွန်မှသာချစ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုနှင့်သူတို့၏လက်ျာင်. အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကဘာလုပ်အခြားသောနေ့ရက်ကိုအဘို့အပိုက​​ြီးတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာတကယ်အရေးမင့်. ဘယ်သူကမှဖြစ်နိုင်သည်သင့်အဘို့အခွင့်အဘယ်သို့သိနိုင်, ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုမှနားထောင်?
ဒီလုံးဝမမှန်ကန်သည်! အချက်ဖြစ်ပါသည်, ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ထူးခြားတဲ့အလိုဆန္ဒ, လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်. သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုနှင့်တစ်ခုတည်းသောအာရုံစူးစိုက်သည်သင်တို့အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောမိန်းမတဦးကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်. ကာလ.
ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးများမကြာခဏရင့်ကျက်တူစရိုက်လက္ခဏာတို့ကိုအားဆွဲဆောင်လျက်ရှိ (သူတို့ရဲ့ဖေဖေနှင့်တူ), ပိုငွေနှင့်ပိုမိုမြင့်မားလူမှုရေးအဆင့်အတန်း, ပုလ္လိင်, ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အချင်းကို, ယုံကြည်စိတ်ချမှု, နှင့်ဣန္ဒြေ, သင်တို့ဝင်စားအဲဒီစရိုက်များနှင့်ကိုမဆိုအာရုံစိုက်ဖို့ဒါကြောင့်အရေးကြီးပါတယ်.
သက်ကြီးယောက်ျားတွေဟာအသက်ငယ်သောမိန်းမတွေ့ဆုံကြသောအခါထိုသူတို့မကြာခဏအာရုံကြောရယ့်လိုက်တယ်ပြုမူရန်စတင်. ဒီမပြုပါ — ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြစ်.
အဲဒါကပျော်စေပျက်စေသဘောဖြစ်. ပျော်ပါစေ. သူမ၏ Tease. သူမသည်သူကကစားရန်တူဘာမေ့နေတာလားနှင့်အနီးတဝိုက် goof မမူ. ဒါကြောင့်အလေးအနက်ထားဘဝကိုမယူမှတ်မိဖို့အချို့ကိုသင်ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်. ငယ်ရွယ်သောယောက်ျားတွေယေဘုယျအားဖြင့်လုပ်ဖို့မတတ်နိုင်ကြောင်းအနည်းငယ်ကိုအရူး Be နှင့်အရာများအတွက်ရွေးချယ်. ဆက်လုပ်သည်. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်ပျော်ရွှင်ပါ.
3) ခေါင်းဆောင်ဖြစ်. ထိုလူဖြစ်ရ.
ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးအများစုဖွယ်ရှိဦးဆောင်မှတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေနေပါသည်. သူတို့ကအသက်တာ၌နည်းပါးအတွေ့အကြုံရှိသည်ဆုံးနဲ့အလားအလာထွက်ရှိပါတယ်ဘာတွေသူတို့ကိုပြတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေနေပါသည်. ရှေ့ဆက်အချိန်သင့်ရဲ့ရက်စွဲနှင့်အခြားအစီအစဉ်များလုပ်ပါ, ဒါပေမယ့်ထိခိုက်မခံနှင့်သင်ပြီးသားဖြစ်စေကြပြီသောအစီအစဉ်သူမ၏အမြင်ကိုမေးကြည့်ပါ. (သူမသည်ဆူရှီမှမတည့်ဖြစ်စေခြင်းငှါ). လူတ Be, သေးသူမ၏အမြင်ကိုလေးစားပါ. တံခါးများဖွင့်လှစ်, အကိုထိန်းချုပ်ရန်၏အပြင်ဘက်အပေါ်လျှောက်လှမ်း, နှင့်ကုလားထိုင်ထွက်ဆွဲငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးများအပေါ်ကြီးမားတဲ့စိတ်စွဲမှတ်စေရန်အခြားနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်.
4) တစ်ဦးနှင့်တူပြုမူဆောင်ရွက်မထားပါနဲ့ “perv”.
အများစုကဆွဲဆောင်မှုလူငယ်အမျိုးသမီးအချို့ခြေဆွံ့သေ​​ာသူကဝင်တိုက်ခဲ့ကြ, ဖျက်အဟောင်းလေးကို. လွန်းမကြာမီ၌ပြောင်းရွှေ့ဖို့မကြိုးစားပါသို့မဟုတ်သူမသင်ပဲထင်ပါတယ်လိမ့်မယ် “perv” သူမ၏ဘောင်းဘီသို့ရရန်ရှာဖွေနေ. လာတဲ့အခါအတူတူသင့်ရဲ့တစ်ဦးတည်း, ကပရောပရည်လုပ်ခြင်းမှ OK ကိုဖွင်, ဒါပေမယ့်သူ့ကျန်တာဘာမှဘို့သင့်ကိုငါညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရကြကုန်အံ့. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်သွားသောသူမ၏တွှေနိုင်ပါသည်.
ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးများဖြစ်နိုင်ရုံအလွန်ဖွဲ့စည်းထားသောဘဝများနှင့်သုညလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သူတို့ရဲ့မိဘ၏အိမ်တော်ထဲကရပြီ. သူသည်သင့်အားဆွဲဆောင်လျှင်, သင်ကမွန်းကျပ်ပတ်ဝန်းကျင် re-ဖန်တီးပေးနေကြောင့်သူမပဲကျန်ကြွင်းရစ်သောမယ်… သင်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုကိုယ်စားပြုကြောင့်င်. သူမ၏အချို့သောအာကာသပေးပါ. သူမအမြဲအကြောင်းကိုအိပ်မက်မက်မယ့်သောလူကဖြစ်, ပြီးတော့သူမ၏ကိုလိုက်မ. သူမ၏သင်တို့ဆီသို့လာဦးကြစို့.